Toekarena sy Fandraharahàna · Jolay, 2017 · Global Voices teny Malagasy
Toekarena sy Fandraharahàna · Jolay, 2017
Tantara mikasika ny Toekarena sy Fandraharahàna tamin'ny Jolay, 2017
Kolombia: Ny Fanakatonana Ny Gazetiboky Cambio
Amerika Latina 30 Jolay 2017
Nakaton'ny tompony ny gazetiboky Cambio, fantatra amin'ireo tatitra fanadihadiana fanaony. Fanakatonana izay lazaina fa noho ny antony ara-bola. Kanefa ho an'ireo mpanao gazety, dia antony ara-politika no nanosika ny fandraisana fanapahankevitra.
''Voalaza fa natao hanomezam-boninahitra ny vahoaka Iraniana ilay rivopanovàna saingy mihamaro ny vahoaka mijaly mafy noho ny olana ara-toekarena sy ny fahantrana'', hoy i Maryam Shabani.
Arabisc: Mamaky Ady Ny Jamba Ao Maraoka
Tena zavadoza manjo ny maha-olombelona marina tokoa io, izay mahavaky ny fo. Zavadoza ara-tsosialy ho an'io sehatra iray vohitsakitsaka ao anatin'ny fiarahamonina io, izay tsy omena ny zony
Nosy Cayman : Ny Fahasimbana Entin'ny Sambo Mpitatitra Mpizahatany
Karaiba 26 Jolay 2017
Miresaka fohifohy mikasika ny iray amin'ireo safidy sarotra izay atrehan'ny fizahantany ara-toekarena madinika ny mpisera Flickr George Chang ao anatin'ny fanazavana sary iray.
Milaza Lainga Momba Ny Fifanakalozan-Kevitra Teo Amin'ny Governemanta Sy Ny Orinasa Mpitrandraka Volamena Fahatelo Lehibe Manerantany Ny Haino Aman-jery Tanzaniana
Tanzania 25 Jolay 2017
Zavatra iray no nolazain'ny lehiben'ny orinasa mpitrandraka harena an-kibon'ny tany Barrick Gold, fa tena zavatra hafa no nambaran'ny gazety.
Filipina: Firenena Ho An'ireo Mpiasa Ambony
Azia Atsinanana 25 Jolay 2017
42% amin'ireo orinasa no eo ambany fitantanan'ny vehivavy
Iran: Nitokona Ny Mpiasa Noana An'aliny
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 24 Jolay 2017
Nanomboka nitokona tamin'ny herinandro lasa ny mpiasa an'arivony tsy nandray karama tao amin'ny orinasa mpanodina siramamy Haft Tapeh ao Shoush any amin'ny faritanin'ny Khuzestan any Iran . Nandefa ny mpitandro filaminana ny governemanta mba hampiasa famoretana tamin'ireo mpiasa, kanefa mbola nitohy hatrany ny fitokonana.
Congo (RDC): Maritrano Ao Bukavu Sy Ny Fomba Hiatrehana Ny Fiainana Ao Kinshasa
R.D. Kongo 19 Jolay 2017
Mankalaza ny lovam-bakoka ao Bukavu , tamin'ny vaninm-potoana farany nisian'ny lamaodin'ny " Art Deco " izay matetika antsoina hoe "streamline moderne" (fampisehoana maoderina mivantana) ny bilaogy Kivu Express. Manolotra sary maromaro amin'ireo tranobe ao an-tanàndehibe izay naorina tany amin'ny taompolo 50 ny bilaogy.